Top 5 ihuenyo video kpọọ maka Linux
Ọ bụ-ahụ kwuru na Linux bụ otu n'ime ndị kasị ibu OS nyiwe nke ụwa na maka otu ihe ahụ ọ na-arụnyere na ọtụtụ nde nke usoro n'ụwa nile na otu-apụghị ileghara anya a n'elu ikpo okwu mgbe ọ na-abịa na-ede banyere mkpa ngwa na na-na-mepụtara maka ndị ọzọ na nyiwe. Eziokwu nke okwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ ndị na ịzụlite ngwa maka ndị ọzọ na nyiwe maa jide n'aka na a version maka Linux na-kere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụ ya mere ka-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị nkuzi na-agụ na zuru iji jide n'aka na ihuenyo video kpọọ ngwa ọdịnala n'ihi Linux na-abụghị nanị ẹkenam ma onye ọrụ na-ọkọkpọhi kasị mma na ya apụta mgbe ọ na-abịa download dị ka njikọ ga-E nyere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma.
Nkebi nke 1: Mkpa nke ihuenyo video ndekọ
Part 2: Olee ebe na nke kacha mma na ihuenyo video kpọọ
Nkebi nke 3: Top 5 ihuenyo video kpọọ maka Linux
E nwere ọtụtụ uru nke ihuenyo video captures na maka otu ihe ahụ ha na-aghọ ihe akụkụ nke usoro na ga-arụnyere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ihuenyo captures eme ka o kwe ndị YouTube uploaders na nke kacha mma na ọkaibe results. Dabara nke ọma kasị nke ihuenyo video kpọọ software omume bụ n'efu na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ihe omume ndị a ebudatara na arụmọrụ zuru oke na-enwe enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. The n'ozuzu onu nke ihuenyo video kpọọ dabeere na eziokwu ahụ bụ na onye ọrụ na-pacified na nsonaazụ kacha mma na-enwetara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ndị a na ihuenyo video captures na-eji iji jide n'aka na ihuenyo captures na-izi na ọdịdị na-mere na uploaded na weebụ enweghị ihe ọ bụla hassle na nsonaazụ kacha mma na-enwetara na nke a.
Ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na internet na-chọsie na video kpọọ dabeere na ọrụ ahụmahụ ebudatara na arụnyere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi na n'ikpeazụ na nke kacha mma e arụnyere iji jide n'aka na n'ozuzu onu bụ onye na dị na akara na onye ọrụ achọ na ihe ndị a chọrọ. Iji nweta kasị mma na ndị ọkaibe N'ihi na nke a ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na mkpokọta onu bụ ihe na e weere dị ka ihe kasị mma. Onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ma ama weebụsaịtị na-họọrọ ime ọrụ na nke kacha mma n'ụzọ. Na saịtị ndị a na-agụnye CNET, Softnic na downloads.com. Ndị a ga-bụghị nanị inye aka onye ọrụ iji na-enweta nsonaazụ kacha mma ma ga-ekwe ka ha na-kasị mma na ndị ọkaibe results enweghị ihe ọ bụla hassle na na akara na onye ọrụ chọrọ.
Na-esonụ bụ ise n'elu na nke kacha mma na omume na a pụrụ iji jide n'aka na ndekọ n'elu Linux abụghị nsogbu na niile na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ndị ọkaibe results na nke a.
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ala nke nkà omume na a ga-eji na-eme ka n'aka na ndekọ n'elu Linux bụghị ihe nke mgbe nile. The omume ike ga-enweta na enyemaka nke URL na e kwuru n'elu na onye ọrụ nwekwara ike ime ka n'aka na online ndekọ arụmọrụ na-eji idekọ omume na ala na afọ ojuju. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na kasị mma atụmatụ na-enyoba na nke a.
2. Mfe ihuenyo edekọ
A na ngwa na-emekwa ka n'aka na video ihuenyo ndekọ bụ otu n'ime ndị kacha phenomenons na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ya apụta mgbe ọ na-abịa na ndekọ mkpebi na ndị ọzọ yiri echiche na onye ọrụ bụ nchegbu mgbe nile banyere mgbe ngwa nke a genre ebudatara. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ntụziaka na-agụ juputara na URL pasted n'elu na-eme ka n'aka na ọkaibe results na-enwetara na nke a.
3. XviD okpu
A na ngwa dị nnọọ mfe iji na njikwa na e nyere ka onye ọrụ na nke a bụ ndị na-ala nke nkà na ekwe ka onye ọrụ iji na-enweta n'ozuzu ngwa njikwa na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ngwa na-eji iji nwalee arụmọrụ mbụ dị ka mgbe ụfọdụ ufọk ufene version nwekwara ike na-Linux ọrụ n'ime nsogbu.
Ọ bụ usoro ihe omume nke dabeere na Shockwave Flash ọkpụkpọ na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà usoro arụnyere n'elu Linux na ozugbo ọ e mere na onye ọrụ kwesịrị ọ bụla ọzọ omume iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe arụmọrụ na-enwe na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ndekọ mere exported ndị ọzọ ọnọdụ.
5. Record m desktọọpụ
Ọ bụkwa otu nke kasị mma na ọkaibe omume na e mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na mmekọrita ihuenyo ndekọ n'elu GNU Linux. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na usoro ihe omume dị free na-emeghe iyi nke pụtara na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na mmepe ngwaọrụ na-ebudatara na-enweta arụmọrụ zuru oke.
Olee otú Play M4V faịlụ
MPEG Splitter: Olee otú SPLIT MPEG / mpg ka Obere Files
Easy Ụzọ Iji gbazie YouTube Ne ngwa mgbakwunye na Chrome
> Resource> Video> Top 5 ihuenyo video kpọọ maka Linux